တိုက်ခန်းနှင့်ရောင်းရန်ရှိသည် Kemang Village တောင်ပိုင်းဂျကာတာတွင် - စတူဒီယို၊2BR /3BR /4BR
တိုက်ခန်းအမည်: Kemang Village
တည်နေရာ: Jl ။ ပန်းချီဆရာ Antasari no.36, Kemang, တောင်ဂျာကာတာ, DKI ဂျကာတာ, အင်ဒိုနီးရှား 12150
တာဝါ၊ ကြမ်းပြင် / ကြည့်ရန်: Intercon / Empire / နာမည်ကြီး / Infinity / Ritz / Tiffany / Bloomington
အရွယ်အစား: 38/43/73/81/89/95/98/100/107/121/130/148/165/173/205/220/249 စတုရန်းမိုင်
သင်တန်းခန်းမ - ၁ (အရွယ်အစားပေါ်မူတည်သည်)
အိမ်ဖေါ်အခန်း - ၁ (အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍)
အိမ်ဖော်ရေချိုးခန်း - ၁ (အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍)
လုံခြုံရေး - ၂၄ နာရီလုံခြုံရေးနှင့် CCTV၊ သီးသန့်သက်တောင့်သက်သာရှိသော lob ည့်ခန်း၊ ပုဂ္ဂလိကဓာတ်လှေကားနှင့်ကိုယ်ပိုင်လသာဆောင်၊ ယူနစ်နှင့်စက်ရုံသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကဒ်၊ လုံခြုံရေးဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု၊ ရေကူးကန်၊ အားကစားခန်းမနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာ၊ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်
Mall ဆက်သွယ်ထားသောကြယ်၏ရိပ်သာလမ်း၊ ရုပ်ရှင်ရုံ XXI Lippo Mall Kemang ။
areaရိယာနှင့်ဆက်သွယ်သောအင်ဒိုနီးရှား၊ အီတလီ၊ မလေးရှား၊ ဂျပန်၊
Kemang Village Superblock ,ရိယာဖြစ်ပြီးနေထိုင်ရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။
ဂျကာတာ၏အလယ်တွင်တည်ရှိပြီး Mall နှင့်လမ်းလျှောက်ရန်အကွာအဝေး၊ စူပါမားကတ်ကြီးများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဘားများနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံများရှိသည်။
၅ မိနစ် Kemang toရိယာသို့လမ်းလျှောက်ခဲ့သည်။
တနင်္သာရီ၊ တိုနီ၊ တိုနီ၊ Kuningan, SCBD
စတူဒီယို = Rp ၈ သန်း - တစ်လလျှင် Rp ၁၁ သန်း
2 BR = Rp ၁၄ သန်း - တစ်လလျှင် Rp ၁၇ သန်း
2 BR (ပုဂ္ဂလိကဓာတ်လှေကား) = တစ်လ Rp 21 သန်း
3 BR = Rp20 million - တစ်လကို Rp ၂၅ သန်း
3 BR (Private Lift) = Rp ၃၃ သန်း - တစ်လလျှင် Rp သန်း ၄၀
4 BR (Private Lift) = Rp ၃၃ သန်း - တစ်လလျှင် Rp သန်း ၄၀
အနည်းဆုံး ၆ လကြိုတင်ငွေ ပေး၍ ငှားရမ်းပါ
ဆက်သွယ်ရန်: 085694222155 (Call & WhatsApp), 081283755533
WhatsApp ကို: 085694222155
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Kemang Village, တောင်ပိုင်းဂျကာတာ Tags: Antasari, Kebayoran Baru, Kemang မှတ်ချက် Leave
ငှားရန် Kemang Village တောင်ပိုင်းဂျကာတာရှိတိုက်ခန်း - 1 BR /2BR /3BR /4BR အသင့်နေထိုင်နိုင်သောတိုက်ခန်း (များစွာသောယူနစ်)
တည်နေရာ: Jl ။ ပန်းချီဆရာ Antasari No.36P, တောင်ပိုင်းဂျကာတာ, 12150
မျှော်စင်၊ ကြမ်းပြင် / ကြည့်ရှုခြင်း: Bloomington, Cosmopolitan, Empire, Infinity, Intercon, Ritz, Tiffany
အရွယ်အစား: 38/43 / 96/113/120/135/165/170/204/220/240 စတုရန်းမိုင်
လေ့လာရန်အခန်း - မူတည်သည်
အိမ်ဖေါ်အခန်း - မူတည်သည်
အိမ်ဖော်ရေချိုးခန်း - မူတည်သည်
၂၄ နာရီလုံခြုံရေးနှင့် CCTV၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိသော ob ည့်ခန်း၊ ပုဂ္ဂလိကဓာတ်လှေကားနှင့်ကိုယ်ပိုင်လသာဆောင်၊ ယူနစ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကဒ်ပြားများ၊ လုံခြုံရေးဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ၊ ရေကူးကန်၊ အားကစားခန်းမနှင့်ယောဂထောင့်၊
အပူပိုင်းဥယျာဉ်များနှင့်အေရိုးဗစ်ခန်းများဖြင့်ဝန်းရံထားသော The Mall သည်ကြယ်၏ရိပ်သာလမ်းနှင့် Lippo Mall Kemang ရှိ XXI ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အင်ဒိုနီးရှား၊ အီတလီ၊ ဂျပန်နှင့်အခြားစားသောက်ဆိုင်များ။
lippo mall kemang သို့ ၅ မိနစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံကြီးသို့ ၁၀ မိနစ်နှင့်အမျိုးသားသံရုံးသို့မိနစ် ၃၀ ခန့်။
SPH (Sekolah Pelita Harapan), AIS (Australia International School), NIS (Netherland International School) နှင့် Mentari စသည့်နိုင်ငံတကာကျောင်းများနှင့်ဝိုင်းရံထားသည်
JORR သေဆုံးသူလမ်း၊ TB Simatupang၊ Pondok Indah နှင့် Cipete areaရိယာ။
ရောင်းရန်စျေးနှုန်း - အီးမေးလ်ပို့ရန်မလိုပါ
Rp 8.000.000 / လမှစတူဒီယို
2 BR သည်တစ်လလျှင် Rp 15.000.000 မှတစ်လလျှင်ဖြစ်သည်
3 BR သည်တစ်လလျှင် Rp 24.000.000 မှတစ်လလျှင်ဖြစ်သည်
4 BR သည်တစ်လလျှင် Rp 40.000.000 မှတစ်လလျှင်ဖြစ်သည်
ကြိုတင်ငွေပေးဆောင်ရမည့် Minimun6လ
ဆက်သွယ်ရန်: Mario +628121714824
WhatsApp ကို: 628121714824
ငှားရန် Kemang Mansion တိုက်ခန်း BEST PRICE !! ပရိဘောဂ 1BR / 2BR / 3BR တပ်ဆင်ထားသည်
တိုက်ခန်းအမည်: Kemang Mansion
တည်နေရာ: Jl ။ Kemang Raya No.3-5, Bangka, Kec ။ Mampang Prpt ။ , တောင်ပိုင်းဂျကာတာ 12730
တာဝါ၊ ကြမ်းပြင် / ကြည့်ရန်: တောင်နှင့်မြောက်၊
အရွယ်အစား: 60 - 242 m2
အဆောက်အ ဦး - ဂျကာတာရှိအသစ်စက်စက်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်တန်ဖိုးအရှိဆုံးတိုက်ခန်းအဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၄ နာရီ reception ည့်ခံခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးစနစ်များ (လက်ဗွေနှင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ကဒ်)၊ ကားရပ်နားရန်နေရာ၊ အားကစားရုံ၊ ချွေးပေါက်၊ ရေကူးကန်၊ Shopping arcade (Kem-chicks စူပါမားကတ်၊ စာအုပ်ဆိုင်၊ ဆေးဆိုင်၊ ခရီးသွားကိုယ်စားလှယ်၊ ဘဏ်၊ ATM နှင့်ကော်ဖီဆိုင်) ။
ထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များ - ပြည်တော်ပြန်များအတွက်အကြိုက်ဆုံးKemရိယာဖြစ်သော Kemang inရိယာတွင်တည်ရှိသည်။ မဟာဗျူဟာကျသောနေရာ - TB Simatupang (တည်ရှိပြီးရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီများ) မှ ၁၀ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်၊ Sudirman သို့ ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ် Kuningan၊ မိနစ် ၅၀ မှ ၁၀ မိနစ်အတွင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်း (SPH International & JIS)၊ ဆေးရုံ၊ ကုန်တိုက်များနှင့် Kemang inရိယာရှိစျေးဆိုင်အမျိုးမျိုးနှင့်ဖျော်ဖြေရေးများသို့အလွယ်တကူသွားနိုင်သည်။
1BR အမျိုးအစားကို Rp 9.500.000 မှစတင်သည် -
2BR အမျိုးအစားကို Rp 23.000.000 မှစတင်သည် -
3BR အမျိုးအစားကို Rp 32.000.000 မှစတင်သည် -
အဆင့်မြင့်အတွက်အနည်းဆုံး ၁ နှစ်ငှားရမ်းခနှင့်ပေးချေမှု
ဆက်သွယ်ရန်: ကေသီ: 0811 8181 887
WhatsApp ကို: 08118181887
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Kemang Mansion, တောင်ပိုင်းဂျကာတာ Tags: Antasari, Kebayoran Baru, Kemang မှတ်ချက် Leave
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော၊ ကျယ် ၀ န်းသော Senopati တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသော - ဂျကာတာတောင်ပိုင်း - အခမဲ့ - 3BR + 1 ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ 166 sqm, Direct Owner
တိုက်ခန်းအမည်: Pudjiadi Prestige မှ Senopati တိုက်ခန်း
တည်နေရာ: Jl ။ Senopati No.Kav 41, RT.8 / RW.2, Senayan, Kec ။ Kby ။ Baru, တောင်ပိုင်းဂျကာတာ, DKI ဂျကာတာ 12190
Tower / Floor / View: 8 / Sudirman Road ကိုကြည့်ပါ
အရွယ်အစား: 166 စတုရန်းမိုင်
ရေချိုးခန်း - ၃.၅
လုပ်ရတဲ့ - အခမဲ့
ယာဉ်ရပ်နား Space ကို
Rp ။ တစ်လလျှင် 23.000.000
Rp ။ 264.000.000 တစ်နှစ် 1
စျေးနှုန်းများတွင်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများနှင့် cablevision များအားပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
WhatsApp ကို: 08123456261
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Pudjiadi Prestige မှ Senopati တိုက်ခန်း, တောင်ပိုင်းဂျကာတာ Tags: Antasari, Kebayoran Baru, Kemang မှတ်ချက် Leave
ငှားရန်တိုက်ခန်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သည် Kemang Village 1/2/3/4 BR ပရိဘောဂ / Semi ပရိဘောဂ - BEST PRICE !!
တည်နေရာ: Pangeran Antasari နံပါတ် ၃၆ Kemang၊ တောင်ဂျာကာတာ
မျှော်စင်၊ ကြမ်းပြင် / ကြည့်ရန်: Intercon / Cosmopolitan / Empire / Tiffany / Ritz / Infinity / Bloomington
အရွယ်အစား: 38/43 / 73/138/148/220/250 m2
လုံခြုံရေး - ၂၄ နာရီလုံခြုံရေးနှင့် CCTV၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိသော lob ည့်ခန်း၊ ပုဂ္ဂလိကဓာတ်လှေကားနှင့်ကိုယ်ပိုင်လသာဆောင်၊ unit ယူနစ်နှင့်စက်ရုံသို့ဆက်သွယ်ခွင့်ကဒ်၊ ရေကူးကန်၊ အားကစားရုံနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာ၊ အပူပိုင်းဥယျာဉ်နှင့်အေရိုးဗစ်နေရာများဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်။
Kemang Village Lippo Mall Kemang နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည့်တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ SPH International၊ Country Club၊ မင်္ဂလာဆောင် Chapel၊ Cloud Nine၊ Boutique Hotel နှင့် JW Marriott Hotel တို့နှင့်တစ်လှမ်းသာဝေးသည်။ ရရှိနိုင်သည့်မျှော်စင် (၇) ခုရှိသည်။ The Ritz, The Tiffany, The Cosmopolitan, Empire Tower, The Infinity, The Star နှင့် The Bloomington ။ Kemang Village ၎င်း၏နေထိုင်သူများမှလွယ်ကူစွာဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။ ၎င်းသည် Lippo Mall (မီတာ ၃၀)၊ Pelita Harapan နိုင်ငံတကာကျောင်းနှင့်ဆေးရုံအတော်များများနှင့်နီးကပ်စွာရှိသည်။ ဒီတိုက်ခန်းသည် Kemang အနီးတွင်ရှိပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိသည့်အတွက် Sudirman နှင့် Blok M. ကဲ့သို့သောအခြားမဟာဗျူဟာမြောက်သောနေရာများသို့အလွယ်တကူသွားလာနိုင်သည်။
အထူးသီးသန့်တိုက်ခန်းအနေနှင့်, Kemang Village စတူဒီယို,2BR,3BR နှင့်4BR: ယူနစ်လေးမျိုးပေးထားပါတယ်။ ဤရွေ့ကားယူနစ်အမျိုးမျိုးအရွယ်အစားနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ပရိဘောဂအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ Kemang Village superblock ၏အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီသောတိုက်ခန်း၏သင်္ကေတဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အဆောက်အအုံများပါ ၀ င်သောတိုက်ခန်းသည်အဆင့်မြင့်စျေးနှုန်းဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီးဇိမ်ခံပစ္စည်းများနှင့်သီးသန့်သီးသန့်ကိုနှစ်သက်သောနေထိုင်သူများအတွက်သင့်တော်သည်။
Tower Cosmopolitan (3BR): Rp 3.000.000.000
အကောင်းဆုံးအရောင်းအ ၀ ယ်ယူနစ်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ
စတူဒီယို 38, 43 = Rp 7.000.000 - 10.000.000 / တစ်လ
2 BR = Rp 14.000.000 - 17.000.000 / လ
2 BR (ပုဂ္ဂလိကဓာတ်လှေကား) = Rp 21.000.000 - တစ်လလျှင် 25.000.000
3 BR = Rp 20.000.000 - 25.000.000 / လ
3 BR (ပုဂ္ဂလိကဓာတ်လှေကား) = Rp 33.000.000 - တစ်လလျှင် 40.000.000
4 BR (ပုဂ္ဂလိကဓာတ်လှေကား) = Rp 38.000.000 - 45.000.000
အနည်းဆုံးငှားရမ်းခ - ၁ နှစ်
ငှားရန် / ရောင်းရန် Kemang Village တိုက်ခန်း - စတူဒီယို /2BR /3BR /4BR ပရိဘောဂအစုံအလင်ပါ ၀ င်သည်
တည်နေရာ: Jl ။ ပန်းချီဆရာ Antasari မဟုတ်ဘူး 36, တောင်ဂျကာတာ
တာဝါ / ကြမ်းပြင် / ကြည့်ရှုခြင်း: Intercon, Empire, Infinity, Bloomington, Tiffany, Cosmopolitan, Ritz
အရွယ်အစား: 38/43/96/113/120/135/165/170/204/220/240 m2
Lippo Mall Kemang ဘေးတွင်တည်ရှိသည်။
Kemang Raya သို့လမ်းလျှောက်ရန်။
SOS ဆေးခန်းနှင့်နီးစပ်သော Brawijaya ဆေးရုံ၊ Kemang ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှု။
SPH (Sekolah Pelita Harapan), AIS (Australian International School), NIS (Netherland International School) နှင့် Mentari ကျောင်းများကဲ့သို့သောနိုင်ငံတကာကျောင်းများနှင့်ဝိုင်းရံထားသည်။
Rp 9.000.000 / လမှစတူဒီယို
4 BR သည်တစ်လလျှင် Rp 40.000.000 မှလ
ဆက်သွယ်ရန်: Dea: 0814-1355-9213
WhatsApp ကို: 081413559213
ငှားရန် Kemang Village Residences တိုက်ခန်းအသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်
တည်နေရာ: Jl ။ ပန်းချီဆရာ Antasari No.36P, Bangka, Kec ။ Mampang Prpt ။ , Kota Jakarta Selatan, 12150
တာဝါ၊ ကြမ်းပြင် / ကြည့်ရန်: TOWER အားလုံး
အရွယ်အစား: 38-249 m2
ရေချိုးခန်း - ၂/၃
ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ Sof ည့်ခန်း: ဆိုဖာ၊ ကော်ဖီစားပွဲ၊ တီဗီ
ထမင်းစားခန်း - စားပွဲနှင့်ထိုင်ခုံများ
ရေချိုးခန်း: ရေချိုးခန်းနှင့်ရေချိုးကန် (အမျိုးအစားပေါ်မူတည်)
အိပ်ခန်း: Matrass, အိပ်ရာခင်း, တစ်သင်းလုံးကစားပွဲ၊ ဗီရို
မီးဖိုချောင် - မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းကိရိယာ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်၊
အဝတ်လျှော်စက် - အ ၀ တ်လျှော်စက်နှင့်အခြောက်ခံစက် (အမျိုးအစားအမျိုးအစားပေါ်မူတည်)၊ သံ၊ မီးပူ၊
လသာဆောင် - အကြီးအသေး (အခန်းအမျိုးအစားအပေါ်မူတည်)
မြင်ကွင်း - အခန်းအမျိုးအစားအပေါ်မူတည်သည်
First Media မှအင်တာနက်နှင့်တီဗီကေဘယ်လ်ပံ့ပိုးသူ
ပြောင်းရွှေ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်လွှဲပြောင်း - ထွက်ရွှေ့ပါ
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအထောက်အကူ - ​​အင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုခြင်း
Graha kapital 1 Suite 503. တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးသည်ဂျကာတာဆလတ်တန် (Jalan Kemang raya No. 4)၊ Kemang village နေအိမ်များ)
စတူဒီယို = IDR ၁.၁ Milyar (TERMURAH)
စတူဒီယို = IDR ၆,၅၀၀,၀၀၀ - IDR ၁၀၀,၀၀၀ စတင်သည်
2 BR = IDR ၁၂,၀၀၀,၀၀၀ - IDR ၂၅,၀၀၀,၀၀၀ စတင်သည်
3 BR = IDR ၁၂,၀၀၀,၀၀၀ - IDR ၂၅,၀၀၀,၀၀၀ စတင်သည်
အနည်းဆုံး ၆ လငှားရမ်းခ
ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်း + ၁ လအပ်ငွေ
ဆာဗာဂျကာတာ: 0811-876-776 / 081804600069 (WA / Telf)
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက် www.savajakarta.com သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ
WhatsApp ကို: 0811876776
ငှားရန်နှင့်ရောင်းရန်ရှိသည် Kemang Village တိုက်ခန်း - စတူဒီယို /2BR /3BR /4BR ပရိဘောဂအစုံအလင်ပါ ၀ င်သည်
တာဝါ၊ ကြမ်းပြင် / မြင်ကွင်း: Intercon, Empire, Cosmo / high floor
စက်ရုံ: မိုးလုံလေလုံရေကူးကန်၊ ပြေးလမ်း၊ အားကစားရုံ၊ တင်းနစ်ကွင်း၊ Country Club၊ Alfresco Dinning၊ Pelita Harapan မှနိုင်ငံတကာကျောင်း၊ Shopping Mall - Lippo Kemang Village Hall, Hypermart စူပါမားကက်, JW Marriot.5 မှကြယ် ၅ ပွင့်ဟိုတယ်ကို ၀ င်ရောက်နိုင်သည် Kemang Village တိုက်ခန်းရှုပ်ထွေးသော၊
Rp 9.000.000 / လမှစတူဒီယို။ အနည်းဆုံး ၆ လငှားရမ်းခ
၂ BR သည်တစ်လလျှင် Rp ၁၆.၀၀၀.2 မှစတင်သည်။ ၁ နှစ်အတွက်အနည်းဆုံးငှားရမ်းခ
၂ BR သည်တစ်လလျှင် Rp ၁၆.၀၀၀.3 မှစတင်သည်။ ၁ နှစ်အတွက်အနည်းဆုံးငှားရမ်းခ
၂ BR သည်တစ်လလျှင် Rp ၁၆.၀၀၀.4 မှစတင်သည်။ ၁ နှစ်အတွက်အနည်းဆုံးငှားရမ်းခ
ဆက်သွယ်ရန်: 0821-1030-1279 (Call / WA)
ငှားရန် Kemang Village တောင်ပိုင်းဂျကာတာရှိတိုက်ခန်း - ၁ / 1/2/3 BR ပရိဘောဂအစုံအလင်ပါသော (များစွာသောယူနစ်)
တည်နေရာ: Jl ။ ပန်းချီဆရာ Antasari No.36P, တောင်ပိုင်းဂျကာတာ 12150
စက်ရုံ - ၂၄ နာရီလုံခြုံရေးနှင့် CCTV၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိသော L ည့်ခန်း၊ ပုဂ္ဂလိကဓာတ်လှေကားနှင့်ကိုယ်ပိုင်လသာဆောင်၊ ယူနစ်များနှင့်စက်ပစ္စည်းများသို့ဆက်သွယ်ခွင့်ကဒ်များ၊ လုံခြုံရေးဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ၊ ရေကူးကန်၊ အားကစားခန်းမနှင့်ယောဂထောင့်၊ တင်းနစ်ကွင်း၊
WhatsApp ကို: 081315233267
ငှားရန် / ရောင်းရန် Kemang Village တိုက်ခန်း - အိပ်ခန်း ၂ ခန်းပါ ၀ င်သောပုဂ္ဂလိကဓာတ်လှေကားနှင့်ငှားရန်၊
တည်နေရာ: Jl ။ ပန်းချီဆရာ Antasari No.36, RT.14 / RW.5, Bangka, Kec ။ Mampang Prpt ။ , တောင်ပိုင်းဂျကာတာ, Daerah Khusus Ibukota ဂျကာတာ 12150
တာဝါ၊ ကြမ်းပြင် / မြင်ကွင်း - Infinity နှင့် Impire
အရွယ်အစား: 113 m2 (2 အိပ်ခန်းပုဂ္ဂလိကဓာတ်လှေကား) နှင့် 132 m2 (အိပ်ခန်း 3)
အဆောက်အ ဦး - မျှော်စင်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သီးသန့် S.pool၊ အားကစားရုံ၊ တောင်းကွင်း၊ ကစားကွင်း၊ မျှော်စင်အားလုံးအတွက်ကြီးမားသောရေကူးကန်
အပိုဆောင်းအချက်အလက်များ - အနည်းဆုံး ၆ လငှားရမ်းခ
ရောင်းရန်စျေးနှုန်း: အိပ်ခန်း ၂ ခန်းပါပုဂ္ဂလိကဓာတ်လှေကား - Infinity Tower Rp ။2(ညှိနှိုင်း)
Rp 18.000.000 / month - အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပါပုဂ္ဂလိကဓာတ်လှေကားနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖော်ရွေ
Rp 16.000.000 / month - အိပ်ခန်းသုံးခန်း
WhatsApp ကို: 082124898267
စာမျက်နှာ1 စာမျက်နှာ2 ... စာမျက်နှာ130 နောက်တစ်ခု →